Waa waqtigii la cusbooneysiin lahaa! IOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 iyo macOS Big Sur 11.6 ayaa hadda la heli karaa | Wararka IPhone
Waa waqtigii la cusbooneysiin lahaa! IOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 iyo macOS Big Sur 11.6 ayaa hadda la heli karaa
Dhowr saacadood ka hor kii ugu dambeeyay Noocyada la heli karo ee macruufka 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2, iyo macOS Big Sur 11.6 sidaa darteed dhammaan kuwa haysta ikhtiyaarka ah inay cusboonaysiiyaan qalabkooda ayaa hadda sameeya. Marka laga hadlayo iPhones, waxaa muhiim ah in la rakibo noocaan cusub maadaama ay xallinayso nuglaanta muhiimka ah.
Nooca cusub ee macruufka 14.8 wuxuu soo afjarayaa daloolka amniga ee uu kashifay Citizen Lab. Dareenkan, waxaa muhiim ah in iPhone -ka la cusbooneysiiyo laakiin sidoo kale aaladaha intiisa kale sida iPad, Apple Watch iyo dabcan Mac -yaasheena.
Hadda diyaar u ah soo dejinta
Dhammaan noocyadaas ayaa hadda diyaar u ah in lagu rakibo aaladaha ku habboon. Dareenkan, hagaajinta ayaa diiradda lagu saarayaa amniga iyo xasilloonida illaa nooca ugu dambeeya ee macruufka 15, iPadOS 15 iyo kuwa kaleba ay yimaadaan, taas oo ku dari doonta waxyaalo cusub oo muuqda. Ilaa inta ay tani si rasmi ah u dhacayso waa inaan qalabkeenna ka dhignaa kuwo la cusboonaysiiyo intii suurtagal ah waana sababtaas Waxaan ku talinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo rakibo noocyadan cusub.
Xusuusnow marka laga hadlayo Apple Watch waa inaad hubisaa taas xeedho waa ku xiran yahay iyo kala duwan ee iPhone ku xiran shabakad Wi-Fi. Markaan helno waxaas oo dhan waxaan ku fulin karnaa cusboonaysiinta dhibaato la'aan haddii aanaan haysanin si otomaatig ah ama annaga si aan u soo dejisanno rakibidda nooca habeenkii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Waa waqtigii la cusbooneysiin lahaa! IOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 iyo macOS Big Sur 11.6 ayaa hadda la heli karaa
Waxaan diiday inaan ka cusboonaysiiyo 14.4.2 sababtuna tahay ku guuldaraysiga maaraynta baytariga. Waxaan haystaa iPhone 7 oo aan batteriga cusbooneysiiyay bishii Maarso ee sanadkan. Ma ogtahay haddii ay hore u xaliyeen?
Waxay soo bandhigtay kiisas badan oo iPhone 13 ah oo Twitter ah
Shazam wuxuu aqoonsaday in ka badan hal bilyan oo heeso ah Xarunta Xakamaynta